Saraakiil maxkamadeed oo ka socda uganda oo soo gaaray Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Saraakiil maxkamadeed oo ka socda uganda oo soo gaaray Muqdisho.
By HornAfrik	 On Oct 6, 2018
Muqdisho-Hornafrik-Xubno ka tirsan Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida ee Uganda ayaa jooga Somalia si ay uga hortagaan in la qariyo kiisas ciidan in la qaariyo, sida uu Daacabay Wargeeyska Daily minitor.
Isniintii ayaa maxkamadeeynta general ka tirsan Booliiska Uganda oo Dalkas ka dhici lahayd waxaa ay u baaqatay in Garsooreyaashii maxkamadda qaarkood ay Soomaaliya joogaan si ay Kiisas kale u maamulaaan, ayuu sheegay Wargeysku.
Si rasmi ah uma cadda waxaa maxkamadda Ciidanka Uganda ay Soomaaliya usoo aaday.
Si kastaba ha noqotee Afhayeenka Ciidanka Richard Karemire ayaa shegay in ay shaqo caadi ah tahay in Maxkamadda Ciidanku ay fariisato Soomaaliya iyo meelo kale oo ka baxsan Kambala si ay u qaado Dacwado ciidan.
“wa cadi in ay Maxkamadda Ciidanku Soomaaliya aado markasta oo ay jiraaan Sababo ay halkaaas ku aado” ayuu sheegay Afayeenka Ciidanka Uganda.
Balse Karemire waxaa uu diiday in sheego waxa ay yihiin Kiisaska Maxkamada Uganda ay Soomaaliya ku qaadeeyso.
Dowlada Soomaaliya oo la sheegay in ay fara gelin ku hayso Mooshinka Madaxweyne Waare.
Shir ka dhan ah Dowlada dhexe oo ka socda kenya.